(Hadhwanaagnews) Friday, January 11, 2019 09:14:01
Qof waliba isaga ayaa waqtigiisa qiimo gaar ah u yeela. Sida aan ka warqabno qof wal oo koonka saarani waxa uu haystaa ama ku xisaabtamaa
Su’aashan jawaabteeda waxa si sax ah u helay in
yar oo fara ku tiris ah oo dadkeenna ka mid ah, intaas heshayna waa inta yar ee waqtigooda ka faa’iidaystay ee gartay qiimaha uu u leeyahay kuwaas oo uga faa’iidaystay wax badan oo faa’iido u leh naftooda, if iyo aakhiraba anfacaya, ha ugu horreeyaan khayrka iyo cibaadada suubbaniye.
Halkaa ayuu ka bilaabaa calaacal iyo murugo isaga oo iska qoomamaynaya khasaaraha uu naftiisa baday ee uu ka taagan yahay waqtigii iyo caqligii uu Rabi ugu deeqay iyo noloshiisan bilaa qiimaha ah taasina waa halkay Soomaalidu kaga maahmaahdo (nin yaraan ku loofaray wuxuu lumiyey raadcee). Halka kii yaraa hadduu 60 gaadho uu ku gaadhayo farxad iyo guul iyo nolol qiima leh ileen markii uu waqtiga haystey buu waqtigiisii qiimo u yeelee.
1. Shalay Waa maalin tagtay oo aan kugu soo laabanayn wixii ay guul iyo khasaare ba lahayd way la tagtay, mana soo ceshan kartid. Waxa se laga yaabaa haddii aad tahay qof dhugasho leh inaad haddana si dadban uga faa’iidaysato maalintaa ku dhaaftay ee aan soo noqoshada lahayn, Waxa su’aashu tahay sidee ayay suurto gal u tahay inaad tidhaa waqti tagay ayaan ka faa’iidaysanayaa? Way fududdahay, waxaana garan kara kaliya qof caqli u saaxiib ah, Ugu horrayn waa inaad dareento wixii ku seegay shalay kuna dedaasho in aanay dib u dhicin si ay dawo ugu noqoto soo noqnoshada marxaladda caynkaas ah.
2. Maanta Waa maalinta ugu qaalisan cimrigaaga waana raasammaalka ugu weyn ee aad haysato, Waa maalinta ugu qaaalisan noloshaada qiimaha noloshaada oo dhamina waxay ku xidhan yihiin saacadaha yar ee ku jira noloshaada, qiimaheeduna waxa ay noqonaysaa sida aad hadba ugu faa’iidaysato oo keliya waayo manta markaad ka faa’iidaysato berrina waad ka faaidaysankartaa iyo cimrigaaga oo dhanba laakiin se hadaad maanta lumiso beritana waad lumin sidaasaanad ku lumisay noloshaadii oo dhan waxaa la yidhi (qofka waxa jooga aan garani waxa soo socda ma garto).
3. Berri Berriyeey maxaa tahay? waa maalin maqan mana garan kartid waxa ay kuu sido waxay noqon inaad gaadhi iyo in kale alle (SWT) ayaa keligii og berri iyo waayaheeda mana aha inaad ku xisaabtanto waxanad garanayn wax ay noqon (haddaad waa bariisato ha sugin in aad galab dhacsato hadii aad galab dhacsatana ha sugin in aad waa bariisato) Waayo ma ogid inaad subax leedahay iyo in kale, laakiin maanta ka dhig maalinta guushaada hawl-maalmeed kaagana u samee sida ugu wacan ee ugu quruxda badan hammigaaga iyo dadaalkaagana isugu gee saad manta u guulaysan lahayd, taasina waa sirta nolasha sarraynta iyo farxadda, waxa aa la yidhaah daa (qaamuuska waqtiga kelmed keliya ayaa ku jirta kelmedaasina waa “ iminka ama hadda” macnihii waa daqiiqadaa aad hadda joogto oo keliya). Taasina waxa ay kuu caddaynaysaa in waxa aad haysataaba yahay daqiiqaddaa aad joogto oo keliya, qiimaha noloshaaduna waa hadba inta ku soo marta sida aad uga faa’iidaysato.
Waqtiga qiimihiisa in badan baa diinteennu innagu boorisay ka faa’iiday-sigiisa kaas oo aan ka soo qaadan karno Xadiiskii shariifka ahaa: shan ka faa’iidayso shan ka hor, Waxaa ka mid ahaa shanta: ka faa’idayso firaaqadaada mashquulkaaga ka hor, Carabtuna waxa ay ku maahmaahaan “qof waliba waa ina maalintii in ka badan inta uu yahay ina aabbihii”.
Xikmado iyo meelo badan oo diinteena ka mid ah ba waxaa kaaga muuqanaya oo ay ina farayaan waa qiimaha waqtigu leeyahay inagana sida inagu waajib ka ahi waa in aan ka faa’iidaysanaa maalmaha nolosheena si aan ifka sharaf iyo cisi ugu noolaano aakhirana camal wanaagsan oo ina anfaca aynu u kasbano, waa in aad noqotaa qof noloshiisa iyo naftiisa toona aan faa’iido la’aanta iyo maalaaa yacnigu boos ka lahayn oo aanay uga bannaanayn.